Articles tagged 'international monetary fund'
Clear arrears first, IMF tells ED 16 December 2018 HARARE - President Emmerson Mnangagwa's administration has put in place a viable plan to turn around Zimbabwe's economic fortunes, the International Monetary Fund (IMF) has said, but called on the country to quickly clear its foreign arrears first. The IMF said it was in talks with Zimbabwe to...
Zim economic difficulties deepen — IMF 6 May 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) says Zimbabwe's economic difficulties have deepened with conditions constrained by tight liquidity and negative inflation. IMF mission chief for Zimbabwe Domenico Fanizza, in a statement on the 2016 Article IV consultation with Zimbabwe and the th...
Act now on reforms — IMF 29 March 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) says Zimbabwe needs to act now if it is to reverse the deepening economic difficulties. The institution's head of mission to Zimbabwe Domenico Fanizza said the investment-hungry country needed not wait any longer, but act on its policies. Our s...
First Mutual banks on Zim debt plans 24 March 2016 HARARE - Financial services group First Mutual Holdings (First Mutual) says it is banking on Zimbabwe's re-engagement discussions with multilateral lenders to access a capital injection and boost operations. “We are sure the re-engagement talks are going to be successful and we will get equity...
IMF slashes Zim's economic growth target 10 March 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) has slashed Zimbabwe's economic growth forecast to 1,4 percent this year against Finance minister Patrick Chinamasa's 2,7 percent growth target. An IMF official leading a delegation from the Bretton Woods Institution — currently in the country to ...
Zim's last chance to secure IMF funding 10 March 2016 HARARE - Zimbabwe is facing a crunch time this week when an International Monetary Fund (IMF) visiting team is expected to give reports on the third and final assessment of the staff-monitored programme which ended on December 31 last year. The country started working on the IMF-administered p...
Zim, IMF agree on debt repayment plan 11 October 2015 HARARE - Zimbabwe and its creditors this week agreed on an arrears repayment strategy which entails the clearance of the country's $1,8 billion outstanding amount by April 2016, Finance minister Patrick Chinamasa has said. The Treasury chief on Thursday said the strategy was for Zimbabwe's thr...
Zim to renegotiate IMF, WB debt 8 September 2015 HARARE - Zimbabwe is set to meet with multilateral creditors next month at the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) conventions in Lima, Peru, to renegotiate the country's external debt, a Cabinet minister said. Finance minister Patrick Chinamasa yesterday told journalists...
Zim economy to regress further: IMF 23 April 2015 HARARE - Zimbabwe's economy is set to slump further this year due to continued decline in global commodity prices, fiscal challenges, and possible difficulties in policy implementation, the International Monetary Fund (IMF) has said. This comes as the Bretton Woods institution had earlier pred...
Zim pays IMF paltry $150k 11 March 2015 HARARE - Broke Zimbabwe government is making paltry 'token' payments of $150 000 monthly to the International Monetary Fund (IMF) to clear its $124 million debt, Finance minister Patrick Chinamasa has said. Zimbabwe is badly in debt, owing nearly $10 billion in domestic and foreign obligations...
Clear arrears first, IMF tells Zim 5 March 2015 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) says Zimbabwe must first clear its more than $150 million debt to the Bretton Woods institution before the country can access any new loans. Domenico Fanizza (pictured), the IMF head of mission to Zimbabwe told Parliament's Finance committee on We...